QARDHO, Puntland - Wafdi ballaaran oo ay hogaaminayaan Madaxweynaha dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo hogaamiyaha Puntland ayaa gaarey magaalada Qardho ee xarunta gobolka Karakaar.
Safar dhanka dhulka ah ayuu ku tagey Wafdiga Madaxweyne Farmaajo Qardho halkaasi oo ay kusoo dhaweeyeen mas'uliyiin, Odayaal dhaqan iyo dadweyne aad u badan oo kaga hortagey banaanka magaalada.
Wafdigan ayaa saaka ka amba-baxay magaalada Garoowe oo ay ku joogeen booqasho qaadatay saddex maalin, kadib markii uu yimid Axadii hore.
Safarka Madaxweynaha Soomaaliya, ayaa la xariira sidii uu ugu kuurgali lahaa xaaladda guud ee dadka ku nool Puntland iyo ammaanka sida uu war-saxaafadeed uu qabtay Axadii hore ku sheegay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
Amaanka Qardho ayaa aad loo adkeeyay kahor imaanshaha Madaxweyne Farmaajo, iyadoo ay uga sii horeeyeen wafdi hordhac ah oo xalay halkaasi gaarey, sida ay sheegayaan Wararka Warsidaha Garowe Online.
Wafdi Madaxweynaha ayaa joogi doono Qardho mudo hal maalin ah, isagoo uga soo gudbi doono Magaalada Boosaaso, ee xarunta gobolka Bari oo hadda ay ka socoto diyaar-garowga soo dhaweyntiisa.
Socdaalka Madaxweyne Farmaajo ee Puntland oo soo billowday maalintii Axadii ee lasooa dhaafay ayaa waxa uu noqonayaa midkii ugu horeeyay tan iyo markii la doortey bishii Febuary ee 2017-dii.
Lugta ugu dambaysa ee safarkiisa waxa uu ku tagi doonaa magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug iyo deegaanno kale oo katirsan Galamudug.
Wararka kale oo uu helayo Garowe Online, ayaa sheegaya in Farmaajo uu sidoo kale socdaal ku mari doono qaybo kamid ah gobollada dhexe ee dalka.
Socdaalkan ayaa imaanaya xilli xukuumadda sannad jirka ah ay doonayso inay maamulka gaarsiiso dalka oo dhan, iyadoo horay u ballanqaaday inay doorashada dambe gaarsiin doonaan qof iyo cod.
Fariimaha Farmaajo uu ka aruriyay shacabka Puntland [Dhageyso]
Puntland 13.01.2018. 12:26
Madaxweyne Farmaajo ayaa ka hadlay Fariisamaha uu ka aruuriyay shacabka Puntland...
Puntland 05.01.2018. 03:20
Puntland: Gaas oo ka hadlay safarkii Imaaraadka iyo Qaraxii Galkacyo
Puntland 30.04.2018. 19:04
​Gaas: Shirka Kismaayo Ujeedo gooni ah lagama laha
Puntland 08.10.2017. 14:12
Puntland: Khasaare ka dhashay rabshado ka dhacay Boosaaso
Puntland 01.11.2017. 13:31